CRACHAT/REHOKA – FANTSY BOX
Home Forums Coq de combat Santé et croissance CRACHAT/REHOKA
Ce sujet a 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour par BONDIKELY Samouraï CHanceux, il y a 3 ans et 2 mois.
23 mars 2016 à 9 h 44 min #922
FOMBA IRAY MAHOMBY, HO FANASITRANANA
Tadidio ry zalahy fa tena Antibiotique avo lenta ny TONGOLO BE. Eo koa ny masoandro. Ka rehefa ampiarahina ireo d mahatsara zavatra betsaka. Ndao ary
1- Alaina ny Akoho d afatotra raha tsy manana ilay fanalana ‪#‎souffle‬, afatotra am toerana azony masoandro tsara mandritrany ora mety maromaro miankina aminy fahitanao azy ao sy ny fahazakan’ilay Akoho > tsy tokony ho mihoatrany 1h45 ny ela indrindra. Tsy azo omena rano, tsy omena sakafo.
2- Refa vita izay d alaina ny Akoho ary bataina d entina maka maloka d atao maka aina izy mandritrany 5min sady manomana tongolo ianao.
3- Alaina ny tongolo iray (1) ka hatraminy (3) arakaraka ny habeany, raha kely2 d vakina efatra. D alaina ny Akoho d kakaana na sesefana ho laniny daoly ilay tongolo teo. Tokony ho mibontsina kely ny takourbabony na tranon-kanina-ny. ‪#‎Fanamarihana‬ kely, iny efa andeha hanesika iny mihitsy ianao vao mamaky an’ilay tongolo satri ilaina ilay FOFONA mahery iny, ny RANONY ary ny DITY.
23 mars 2016 à 9 h 50 min #923
Efa andramanako ihany koa ny injection intramusculaire 1 cc pénistrophene + 1 cc AD3E mandritry ny 3 andro fa tsy efficace noho ny tongolo alou raha ny fahitako azy 🙁